Raim-pianakaviana WWE 5 izay sandoka tanteraka - Wwe
Raim-pianakaviana WWE 5 izay sandoka tanteraka
Ny WWE no orinasa fialam-boly fanatanjahan-tena lehibe indrindra manerantany. Ny orinasa dia mandefa seho telo isan-kerinandro ao amin'ny USA Network - Monday Night Raw, Smackdown Live ary ny NXT.
Rivotra maharitra mandritra ny adiny 3 fa ny Smackdown sy ny rivotra NXT mandritra ny 2 ora fotsiny. Ireo mpanoratra dia mila mamorona script ho an'ireo seho telo ireo isaky ny herinandro, ary mety ho asa goavana tokoa izany.
Indraindray ny orinasa dia hanolotra zoro mahaliana fa indraindray kosa mamerina zavatra fotsiny izy ireo tamin'ny lasa. Mba hahatonga ny fifandirana hahaliana kokoa sy ho an'ny tena manokana, ny WWE dia fantatra amin'ny fanaovana fifandraisana sandoka eo amin'ny mpiady ihany koa.
Betsaka ny fotoana nanehoan'ilay orinasa olona ho ray / rahavavy / anadahy / mpiady sandoka sns. Na izany aza, tsy ilaina ny manonona fa tsy tena izy ireo fifandraisana ireo.
Ny ohatra iray amin'ireo dia nanomboka tamin'i Ryan Shamrock izay natolotra ho rahavavavavin'i Kay Shabe an'ny superstar amin'ny toetr'andro Ken Shamrock tamin'ny tranga farany Kurt Angle sy Jason Jordan. Ny orinasa dia nanolotra tantara iray izay i Jordan no zanakalahin'i Angle efa ela very. Saingy, nibolisatra ratsy ity lalam-pifandraisana ity satria fantatry ny rehetra fa lainga izany.
Na izany aza, taona vitsy lasa izay, raha tsy fironana ny media sosialy ary tsy afaka nanala ny zava-misy tamin'ny Internet ny mpankafy, afaka niara-niasa tamin'ireo karazana làlan-tantara ireo ny WWE.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia dinihinay manokana ny zoro 'dadan'ny mpiady' ary jerena ireo raim-pianakaviana mpiady 5 nanampy ny andalan-tantara izay sandoka tanteraka.
# 5 Eddie Guerrero Sy Dominic Gutierrez
Dominic no tena zanakalahin'i Mysterio
shawn michaels vs style aj
Eddie Guerrero dia iray tamin'ireo mpikomy indrindra tamin'ny tantaran'ny tolona pro. Tsy mbola nandresy tamin'ny tompon-daka tamin'ny WWE izy, saingy mbola namela ny asany ihany.
Tamin'ny taona 2005, 'Latino Heat' dia voarohirohy tamina tantara an-tsarimihetsika niaraka tamin'ny superstar meksikana Rey Mysterio izay nifanolanan'izy ireo noho ny fitandremana ara-dalàna ny zanakalahin'i Mysterio Dominic.
Eny, marina fa nifamely ireo mpiady roa ireo mba hahazoany ny zon'ny zazalahy Dominic, 8 taona. Eddie dia nilaza fa izy no rain'io zazalahy io fa tsy Rey Mysterio.Izy no iray amin'ireo tantara sarotra indrindra tamin'ny WWE tamin'izany satria ny ankamaroan'ny mpankafy tsy nahalala ny marina.
Mysterio dia nandresy ny fihaonan'izy ireo tao amin'ny SummerSlam ary nitaky ny fikajiana an'i Dominic araka ny tokony ho izy.
Mahaliana ny manamarika fa nanaraka ny dian-tongotr-drainy i Dominic ary mpanao tolona nosoniavina tamin'ny marika manga WWE izy.
maninona ny olona sasany no tia tena
tsapako fa tsy tianao ny manodidina ahy
amin'ny fitiavana vs tiako ianao
maninona ny lehilahy no misintona rehefa tiany ianao
ny vadiko tsy mila ahy intsony